Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyadaha S.Ogadenya oo taageeray go’aankii wafdiga JWXO wadahadalka uga qaybgalay
Jaaliyadaha S.Ogadenya oo taageeray go’aankii wafdiga JWXO wadahadalka uga qaybgalay
Posted by ONA Admin	/ October 21, 2012
Waxaa si isdaba joog ah ugu soo dhacaya galka Warfaafinta taageero ay jaaliyadaha kasoo kala dirayaan dunida dacaladeeda. Fariimihii ugu dambeeyay ayaan ka kala helnay; Xeryaha qaxootiga ee Kenya, jaaliyadda Al-xasa ee sacuudiga, jaaliyadda Sanca ee yemen, jaaliyadda Sweden, jaaliyadda Qatar ee Doxa, jaaliyadda Perth/Australia. Dhamaan jaaliyadahaa ayaa soo dhaweeyay mawqifka JWXO iyagoo cambaareeyay dawladda Itobiya oon ixtiraamin ajendihii ay horey u saxeexeen.
Guuleed gundiid oo xeryaha qaxootiga Ifo iyo Dhadhaab nooga soo diray warkan ayaa sheegay inay dadweynaha dagan xeryahaa ay falanqeeyeen arimaha ku saabsan shirka iyagoo u dhigay sidan; tan iyo intii uu soo baxay warka sheegaya in uu wada hadal u bilaaban doono Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia iyo gumaysiga Itobiya waxaa siwayn looga dhursugayay natiijada wada hadalka lasheegay in uu Kenya kadhici doono kaasoo guud ahaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada S.Ogadenia ay aad u hadal hayeen. Waxaanan l’is dhexwaday Itobiya wadahadalkan hadayna daacad ka noqonin JWXO maxay samayn doontaa? Maqaadan doontaa wax kayar waxay u dagaalamayeen hadii lasiiyo? Malagu qasbi karaa wax aan u cuntamin shacabka reer ogadenia? Iyo madhici kartaa in ay ONLF xarooto/isdhiibto sida kuwii ka horeeyay? Dhamaan su’aalahaas iyo shakigaasu wuxuu ahaa mid lagu kala qaybsanaa intii ka horaysay wareegii 2aad ee wada hadalka. Sikastaba ha’ahaatee wareegii labaad ee wada hadalka iyo go’aankii ay JWXO qaadatay, kadib markay Itoobiya caqabad ku noqotay wada hadalkii oy shirkiina latimid wax aan u cuntamaynin shacabka Ogadenia iyo jabhadiisaba, go’aanka uu qaatay wafdigii uga qaybgalay jabhadda wadahadalka, waxaa mar qudha dareen farxadeed kusoo dhaweeyay shacabka aan waligii isdhiibin ee Ogadenia oo sugayay in xoriyad lahelo ama halganku socdo.
Waxaa sidoo kale war ka soo saaray jaaliyadda Al-xasa ee Bariga boqortooyada Sacuudi Carabiya iyagoo ku tilmaamay go’aankii wafdiga inuu ahaa mid geesinima ah oo loo baahnaa ka dib markii gumaysatada dad-qalatada ah ee Itobiya ay oofin waayeen heshiiskii ay la saxiixdeen jabhadda wareegii kobaad oy ka baxeen waxii la’isla meeldhigay. Waxay jaaliyada iyo qaybaheeda kala duwan ee maamulka jaaliyada, culimo awdiinka, ururka haweenka, caruurta ay dhamaantood tahniyad baladhan u dirayaan JWXO mawqifka ay ka qaadatay jabhadda wixii ka dhacay Nayroobi.
Jaaliyada Somaalida Ogadenia ee Galbeedka Australia (Perth) ayaa iyaguna hambalyo iy tageero buuxda u diraya go,aankii ay Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogaadeenya ka qaadatay isla markaasna ay ku diiday shuruudihii guracnaa Itobiya ay la timid wadahadalka, oo ahaa shuruudo aan ku jirin qodobadii la isla afgartay wareegii koobaad ee wada hadalka. Dhamaan ururada bulshda ee jaaliyda galbeedka Australia (Perth) ayaa waxay hambalyo aan lasoo koobi karin iyo taageero buuxda u dirayaan Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia (JWXO) go, aanka adag ee qaadatay iyo xilka ay umadooda u hayaan kana dhabeeyeen ujeedadii loo asaasay JWXO. Waxay jaaliyadu cambaareeyeen aqli xumada iyo jaahilnimda indha, la’aanta ah ee Gumasiga Itobiya latimid miiska wadahadalka. Waxayna Jaaliyada Soomalida Ogadenia eeAustraliabaaq u dirayaan dhamaan bulshada Ogadenia ay ugu baaqayaan in la adkeeyo waxyaalha halganka gundhiga u ah halkaana uu manta ku soo gaadhay oo ah MIDNIMO, MINTID, ISKU TASHI.
Jaaliyadda dalka Qatar oo iyaguna shir isugu yimid ay ku falanqaynayeen wadahadlakii ka socdayNairobiayaa baaq taageera ah u diray mawqifka uu qaatay wafdigii uga qabgalay JWXO shirka wadahadalka. Waxay xubnaha jaaliyadda ku tilmaameen arimaha ay shirka la yimaadeen wafdigii Itobiya inay muujinayso dhaqan xumada Itobiya oo aan ixtiraamin heshiiyada iyo balamaha ay galaan. Waxay jaaliyadda Qatar ugu baaqayaan dhamaan shacabka S.Ogadenya inay halganka laba jibaaraan kuna talagalaan guusha inay imanayso Itobiyana aanay is-hortaagi karin rabitaanka shacabka S.Ogadenya ee xaqqa ah.
Jaaliayada Somalida Ogdenia ee wadanka Sweden gaar ahan faraca magaalada Hallstahammar ee Gobalka Vastmanland ayaa si buuxda u taageertay go,aankii Geesinimada lahaa ee ay qadatay Jabahada Wadaniga Xoraynta Ogadenia ee JWXO, kadib isku daygii foosha xumaa ee Itoobiya isku dayday inay ONLF shuruud kaga dhigto saxiixa Dastuurka Gumasiga Itoobiya. Xubnaha Jaaliyadu ayaa wax lala yaabo ku tilmaamey macangagnimada xukuumada Itoobiya oo ku caan baxaday Xasuuqa iyo Dhaca dhamaan shucuubta ku hoos nool gumaysigeeda gaar ahaan shacka Soomalida Ogadeniya. Waxay jaaliyadda sheegtay in umada Soomalida Ogadeniya meel kasta oo ay aduunka ka joogto ay ku diirsatay Go,aankii ay JWXO ka istagtay aqoonsiga Dastuurka Itoobiya isla markaa ay meshaas ka baxday dacayadihii raqiiska ahaa ee kuwa cadawga u edeega ay faafinayeen oo ahaa in JWXO tahay jaga raadis iyo in ay beeraha Agoonta ku qabsanayaan sidi kooxdii Ibrahim dheere ee xarooday.
Baaqa taageerada ah ayaa meela badan naga soo gaadhaya, oo dhamaantood muujinaya inuu shacabka S.Ogadenya diyaar u yahay halganka lagu xoreynayo dalkooda hooyo.